Dad Wanted (2020) | MM Movie Store
ဘလနျကာ ဒီယကျဈဆိုတဲ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေး သူ့ဝါသနာကတော့စကျဘီးတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကို သူ့အမကေလုံးဝမကွိုကျပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလနျကာလေးရဲ့ အဖကေ စကျဘီးရငျးနဲ့ ကားတိုကျမိပွီးဆုံးသှားတာကွောငျ့ပါ….
ဘလနျကာလေးရဲ့မိခငျက လညျး ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးပိုငျရှငျဖွဈတဲ့အတှကျအလုပျတှအေရမျးရှုပျနတောကွောငျ့ဘလနျကာကို သခြောမစောငျ့ရှောကျနိုငျပါဘူးအဲ့ဒါကွောငျ့ ဘလနျကာက ဂဈြကနျကနျလေးဖွဈပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့မကျဆီကိုမှာ စကျဘီးပွိုငျပှဲကငျြးပမယျဆိုတဲ့ သတငျးကို ကြောငျးမှာကွားခဲ့ရတယျ
သူ့အိမျမကျတှအေကောငျအထညျဖျောမယျ့ အခှငျ့အရေးကို ဘလနျကာတဈယောကျဘယျလိုရယူမလဲ ၊ စကျဘီးစီးတာကိုလုံးဝတားမွဈထားတဲ့ မိခငျနဲ့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးမိသားစုနဲ့အတူကွညျ့ရှုဖို့အထူးသငျ့တျောတဲ့အတှကျတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ…
ဘလန်ကာ ဒီယက်စ်ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး သူ့ဝါသနာကတော့စက်ဘီးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သူ့အမေကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလန်ကာလေးရဲ့ အဖေက စက်ဘီးရင်းနဲ့ ကားတိုက်မိပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်ပါ….
ဘလန်ကာလေးရဲ့မိခင်က လည်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေတာကြောင့်ဘလန်ကာကို သေချာမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ဘလန်ကာက ဂျစ်ကန်ကန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့မက်ဆီကိုမှာ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကျောင်းမှာကြားခဲ့ရတယ်
သူ့အိမ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်မယ့် အခွင့်အရေးကို ဘလန်ကာတစ်ယောက်ဘယ်လိုရယူမလဲ ၊ စက်ဘီးစီးတာကိုလုံးဝတားမြစ်ထားတဲ့ မိခင်နဲ့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးမိသားစုနဲ့အတူကြည့်ရှုဖို့အထူးသင့်တော်တဲ့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်…